South Korea oo muddo kordhin u sameyneysa ciidan ka jooga biyaha Soomaaliya
Ciidanka South Korea ee jooga badda Soomaaliya oo mudada loo kordhiyey
Posted On 21-11-2020, 09:25AM
SEOUL, South Korea – Guddiga Difaaca baarlamaanka Kuuriyadda Koonfureed ayaa Jimcadii wuxuu meelmariyey in muddo kordhin loo sameeyo ciidamadda dalkaas ka jooga Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta.
Mareega Yonhap ayaa wxuu daaha ka rogay in ansixinta ay timid ka gedaal markii ay xukuumadda Seoul codsi u dirtay sharci-dejinta, waxaana ay intaas ku dartay in la kordhin doono ciidamadda lagu daabulayo dalalkan.
Ciidamadda Kuuriyadda Koonfureed ayaa ka howlgala biyaha Soomaaliya waxaana ay qeyb-qaata howlgalka la dagaalanka burcad-badeeda oo wadamo reer Galbeed ay hormuud ka yihiin howlgalkaas.
Muddo xileedka cusub ee la siiyey taliska ayaa ku suntay dhamaadka sanadka 2021-ka, sidda ku xusan warbixinta ay warisay majaladda.
Sanadkii 2009-kii ayay ahayd markii ugu horeysay oo Kuuriyadda Koonfureed kusoo biirtey howlgalkaan "qeybta ka ah dedaaladda caalamiga ah ee gobolka looga ciribtirayo fal-dambiyeedyadda ka dhaca badda".
Xilli ay ka howlgalkaan Gacanka Caddan iyo Strait of Hormuz, tiradda guutadda ciidamadda South Korea ee jooga biyaha Soomaaliya ayaan la ogeyn balse waxaa la aaminsan yahay in ay kor-u-dhaafayaan boqol askari.
"In ciidamo loo diro dibadda waxaa sanad kasta cusbooneysiiya guddiyadda baarlamaaniga ah. Muddo kordhinta waxaa aakhiritaakii lagu ansixiyaa fadhi guud oo uu yeesho Golaha Guud ee baarlamaanka," ayuu kusoo xiray.
Japan ayaa horaantii bishaan November waxay sidaan oo kale hal sano oo cusbooneysiin ah u sameysay ciidamadda ka jooga biyaha Soomaaliya kuwaasoo ka qeyb-qaata howlgaladda la dagaalanka shufta badeeda.